त्रिवेणी मेलामा भोटेघोडा लोप भएपछि…. – ejhajhalko.com
त्रिवेणी मेलामा भोटेघोडा लोप भएपछि….
१५ माघ २०७४, सोमबार ११:५४ 139 पटक हेरिएको
गाईघाट । भोटे घोडा लोप हुन थालेपछि जिल्लाको कटारीस्थित कमलानदी त्रिवेणी मेलामा यसको किनबेच नभएकाले यसपटक भने भोटे कुकुरको कारोबार बढेको छ । माघ १ गतेदेखि आजसम्म सञ्चालन भएको त्रिवेणी मेलामा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी भोटे कुकुरको किनबेच भएको मेला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरबहादुर तामाङले बताए ।